विमानमा एक मात्र यात्रु थिए ति युवक जसले ८ घण्टाको उडान समयमा उनले के गरे ? थाहा पाउदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ! - Khabar Nepali
नयाँ दिल्ली। ब्रिटिश एयरवेजको विमान लन्डनबाट ओर्ल्यान्डो जाँदै थियो। यो उडान करिब ८ घण्टाको थियो। यो विमानमा डर्बीका एक युवक पनि चढेका थिए, जो आफ्नो अमेरिकी कलेजबाट घर फर्किरहेका थिए । विमानमा चढेपछि चालक दलका सदस्यहरूले आफू आठ घण्टाको उडानको एक्लो यात्रु भएको बताएपछि ती युवक छक्क परे । आफ्नो यात्रा समाप्त गरेपछि, युवकले स्तब्ध पार्ने टिकटक भिडियो साझा गरे। जसमा उनले आठ घण्टाको यात्राको अनुभव र केबिन क्रुले आफूलाई यो यात्रामा कस्तो व्यवहार गरे भन्ने कुरा सुनाइन् ।
युवकको नाम काई फोसिथ हो र उनी डर्बीका बासिन्दा हुन् । ती युवकले यो विमानमा एक्लै यात्रा गर्नुपर्ला भनेर आफूलाई थाहा नभएको बताए । युवकले यो घटना १० जनवरीको भएको र यसको भिडियो टिकटकमा शेयर गरेको बताए । उनले विमानमा सबै सिट खाली रहेको बताए । केबिन क्रुका एक सदस्य मसँग आएर भने, यो विमानमा तपाई मात्र यात्रु हुनुहुन्छ। युवकले भने, त्यसपछि मैले निर्णय गरें कि म सम्पूर्ण यात्रा रमाइलोसँग गर्नेछु।
अनुसार आठ घण्टा अगाडिको यात्रा थियो र बस्नका लागि सबै सिटहरू खाली थिए, त्यसैले मैले मेरो छेउमा रहेका सबै सिटको हातखुट्टा हटाएँ । बेड जस्तै चार सिट। यसपछि म खुट्टा फैलाएर आरामसँग बसेँ । विमानमा यसरी यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । यो एक साँच्चै आराम यात्रा थियो र बिल्कुल एक सपना साकार भयो।
खाना खाँदा बिस्कुट, रोटी र स्न्याक्सको पूरै बक्स दिएको पनि युवकले भिडियोमा देखाएका छन् । तिनीहरूलाई खाने म मात्र थिएँ। यात्राको क्रममा केबिन क्रुले धेरै खानेकुरा र स्न्याक्स दिएका थिए, त्यो देखेर मानिसको मुखमा पनि पानी आएको हुनुपर्छ भन्ने युवकले बताए । तर यो सबै मेरो थियो। यो यात्रामा एयरलाइन्सले मेरो टिकटलाई बिजनेस वा फर्स्ट क्लासमा अपग्रेड गर्न चाहेको भए अपग्रेड गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरेन र त्यो मेरो लागि सबैभन्दा नराम्रो कुरा भएको युवकले बताए ।
यो भिडियो एक लाख ७० हजार पटक हेरिएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले ती युवकलाई धेरै भाग्यशाली भनेका छन्। तर, कतिपयले विमानमा एक्लो यात्रु र त्यो पनि यति उचाइमा लामो यात्रा गर्न गएकोले अनुभव निकै डरलाग्दो भएको पनि बताएका छन् । कतिपयले यस्तो अवसर पाएको भए त्यसलाई टार्ने र यात्रा गर्न इन्कार गरेको समेत बताए ।
सेयर गरेका छन् भने केही प्रयोगकर्ताले पनि आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै यस्तो अवसर पाएको बताएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले भने कि एक पटक उनले जोन एफ केनेडी एयरपोर्टबाट ग्याटविकको यात्रा गरे र त्यसपछि उनीसँग दस जना मात्र थिए। यसै क्रममा एक प्रयोगकर्ताले कोभिड महामारीको समयमा आफूसँग विमानमा निकै कम यात्रु रहेको र यो यात्रा रोमाञ्चक भएको बताए ।